दाँतमा किरा लाग्ने समस्याबाट २ दिनमा छुटकारा दिलाउने यस्ता छन् प्रभावकारी उपाय – Etajakhabar
मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५ | Tuesday, Nov 13, 2018
दाँतमा किरा लाग्ने समस्याबाट २ दिनमा छुटकारा दिलाउने यस्ता छन् प्रभावकारी उपाय
ताजा खबर:- दाँतमा किरा लाग्नु या केभिटीको समस्या हरेकलाई हुनसक्छ । बढी गुलियो खानु या दाँतको सफाईमा विशेष ध्यान नदिनुको कारणले दाँतमा प्रायजसो किरा लाग्ने समस्या हुन्छ । यसैकारणले दाँतमा दुर्गन्ध आउन थाल्छ र कहिलै-कहिँ अत्यधिक दुखाई पनि महसूस हुनथाल्छ । दाँतमा किरा लाग्नुको कारणले बिस्तारै-बिस्तारै दाँत नष्ट हुनथाल्छ । जुन कारणले असहनीय दुखाई पनि हुन्छ, यसकारण आयुर्वेदका अनुसार केही यस्ता घरेलू उपायको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ, जसले दाँतमा लागेको किराबाट दुई दिनमै छुटकारा दिलाउँछ ।
ल्वांगमा थुप्रै आयुर्वेदिक गुण हुन्छ । यसको प्रयोगले दाँतमा लागेको किराबाट सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसमा रहेको एन्टी-ब्याक्टेरियल गुणको कारणले दाँतमा लागेको किरा नष्ट हुनुको साथै दाँतको दुखाईबाट पनि आराम मिल्छ ।
दाँतमा लागेको किरालाई नष्ट गर्नको लागि तपाई प्याजको बियाँ या प्याजको पनि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जुन दाँतमा किरा लागेको हुन्छ, त्यस दाँतमा प्याजको टुक्रा राख्नुहोस् । प्याजबाट निस्कने लारलाई त्यस दाँतमा लगाउनुहोस् ।
तोरी र फिटकिरी
तोरीको तेललाई तातो बनाई यसमा फिटकिरीको पाउडर मिलाएर एक पेस्ट तयार गर्नुहोस् । जुन दाँतमा किरा लागेको छ, त्यसमा राम्रोसँग यस पेस्टले भर्नुहोस् र थोरै समय मुख खोलेर राख्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईलाई दुख्छ तर केही मिनेटमै दाँतमा रहेको किरा मुखको लारको साथ बाहिर झर्न थाल्छ ।
हींगको प्रयोग पनि निकै फाइदाजनक सावित हुन्छ । यसको उपयोगले किरा नष्ट हुन्छ । तपाई यसको लागि हींगको पाउडरलाई पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् । अब यस पानीलाई थोरै चिसो हुन दिनुहोस् र पानीले कुल्ला गर्नुहोस् । यदि तपाईको दाँत खुकुलो भैसकेको छ र त्यसमा किरा लागिसकेको छ भने त्यस दाँतको खुकुलो भागलाई हींगले भर्नुहोस् । यसो गर्दा खुकुलो दाँतको सबै किरा नष्ट हुन्छ र साथै दुखाईबाट पनि आराम दिलाउँछ ।
जायफलको तेलमा थोरै कपासलाई भिजाएर जुन दाँतमा किरा लागेको छ त्यसमा राख्दा किरा मर्छ । साथै दाँत अझ खराब हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि कम गर्छ ।
नीममा पाईने एन्टी-ब्याक्टेरियल गुण दाँतलाई सफा गर्नुको साथै दाँतको किरालाई पनि नष्ट गर्छ ।
लसुनमा पनि एन्टीबायोटिक गुण हुन्छ । दिनहुँ २-३ दिन सम्म लसुनको २ पोटीलाई चपाउनुहोस् । यसो गर्दा दाँतको दुखाईबाट आराम मिल्छ र दाँतसँग जोडिएको अन्य समस्याहरू पनि नष्ट हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २८, २०७४ समय: २३:४१:०७
के तपाई ओठ सुन्दर बनाउन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् ओठ सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय
एक मात्र छोरा प्रकाशको निधन पछि थलिएकी आमा सिता दाहालको यस्तो अवस्था भएपछि एकाएक प्रचण्ड पुगे कुण्डमा
९० प्रतिशत कलेजो बिग्रिएको बिरामीको टिचिङ अस्पतालमा सफल शल्यक्रिया गर्न सफल भए डाक्टरहरु
नशासम्बन्धी रोगबाट थलिएकी श्रीमती सीताको उपचारका लागि बेनीको तातोपानी कुण्डमा पुगे प्रचण्ड
थाहा पाइराख्नुस् : यस्ता छन् जाडोमा बदाम खानुका फाइदै फाइदा
एचआइभी सर्ने भन्दै डाक्टरले गरेनन् पोस्टपार्टम
पूर्व राजाले उद्घाटन गरेको नेपालगंजको यो हो नेपालकै पहिलो हरित होटल
छाती जोडिएका यी जुम्ल्याहा बच्चाको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया सम्पन्न
यस्तो झुपडीमा पढेर पनि देशभरिका १५ हजार प्रतिस्प्रधीलाई उछिन्दै एमबीबीएसमा १ नम्बरमा नाम निकाल्ने यी हुन् प्रतिमा, जस्लाई नाम निकालेपछि सहयोग गरनेको ओइरो
नेपालका यी अर्बपतिले देउसे-भैलेलाई कति दक्षिणा दिन्छन् ?
फेरी पनि भारतीय रियालिटी सोमा उस्तै सुमधुर आवाज दिएर जजलाई स्तब्ध बनाउदै मेनुकाले जजलाई कुर्चिबाट उठाउन बाध्य पारिन, जजले पनि गरे तरिफै तारिफ (भिडियो)
मलेशियामा मान्छे काटेको ठाउबाट यी युवाले गरे लुकी लुकी लाइभ,हत्यारा लाइ १५ मिनेट मै यसरि समातियो (भिडियो)
अब देखि आफ्नो प्रमाणपत्र बैंकमा धितो राखेर ५ बर्षका लागि ७ लाख ऋण पाइने, तर कदाचित ऋण तिरिएन भने के हुन्छ ?
नेपाल आइडलकी रिमा विश्वकर्मालाई दलित भन्दै कालोमोसो दलियो, हेर्दाहेर्दै यसरी घट्यो यो घटना (भिडियो)
१२४ यात्री र चालक दलका ९ सदस्य रहेको नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने तयारीमा रहेको अरियाना एयरलाइन्सको विमानले अपहरणमा परेको सूचना दियो..
ठग्स अफ हिन्दुस्तानले गर्दा तनावमा आमिर
मेसीका फ्यानहरुका लागी खुशीको खबर : ला लिगामा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड हात पारे कप्तान लियोनल मेसीले
‘मी टू’ काे कहानीले करिश्मा स्तब्ध
राजधानीमा अब दुई स्थानमा सार्न मिल्ने प्रकृतिका आकाशेपुल
काँग्रेसभन्दा कम्युनिष्ट खर्चालु: नेकपाको चियापानमा काँग्रेसको भन्दा चारगुण बढी खर्च